IAbreeze 1BR: 3 Acre Hilltop Villa
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMichael
UMichael unezimvo eziyi-38 zezinye iindawo.
Wamkelekile kwiHacienda Abreeze. Isetingi ye-bucolic ye-Abreeze ihleli kwi-3 ½ yeyona ndawo inomtsalane yeehektare ezincotsheni zenduli onokuzifumana kuyo yonke i-Vieques. Ukuqhayisa ngeembono zepanoramic kuzo zombini iiLwandlekazi zeAtlantiki kunye neCaribbean, i-Abreeze iqinisekile ukuba iya kubhenela ubumfihlo bayo obusondeleyo kunye ne-vistas emangalisayo.
I-Abreeze ineeyunithi ezi-3 ezinokuqeshwa ngokwahlukeneyo okanye xa iyonke. Iyunithi nganye ibucala kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela. Amabala kunye nedama kwabelwana ngalo:
I-Hibiscus ifikeleleka kwizitepsi "zezitena zezityalo" kwaye yindawo enkulu yokulala enegumbi elinye, indlu yokuhlambela enye enekhitshi elikhulu kunye negumbi elikhulu. I-terrace inikezela ngembono yepanoramic kwiCaribbean kunye neAtlantiki.
EZINYE IIUNITHI EZIFUMANEKAYO
Uluhlu lwe-Airbnb: 14613985
I-Bromelia yindlu yesitudiyo enkulu kakhulu enemibono eya ePuerto Rico kwicala elinye, kunye naseSt. Croix kwelinye.
I-Flamboyan Suite 2 BR/1.5 BA
Uluhlu lwe-Airbnb: 16318823
I-Flamboyan inamagumbi amabini okulala abanzi, indawo yokuhlambela eyi-1.5 enekhitshi enethayile ezimhlophe, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, kunye namathafa amabini, umoya ovulekileyo omnye kunye nogqunyiweyo.
Okanye amaqela amakhulu angaqesha yonke iAbreeze.
Uluhlu lwe-Airbnb: 15979926
Ifakwe kwi "Barrio Destino", enye yezona ndawo zinqweneleka kakhulu eVieques, iAbreeze ihleli encotsheni yenduli, ibekwe ngokufanelekileyo ukuze ithathe indawo yepanorama eneembono zehypnotic zeSiqithi saseVieques, ilizwe lasePuerto Rico kunye noLwandle lweCaribbean. Ipropathi ijikelezwe ngamadlelo aqengqelekayo kunye nemithi emidala. Ngokunikwa indawo yayo ekhethekileyo yenduli, imimoya yorhwebo ethambileyo yenza i-Abreeze ibe yindawo etofotofo kakhulu (kunye nebuggy encinci) yokuhlala unyaka wonke.
Le ndawo ikhethekileyo yesiqithi isondele kuyo yonke into, kunye neyona nxalenye ingcono kukuba yimizuzu nje ukusuka ekungeneni okuphambili kwiNdawo yeSizwe yeNdawo yokuKhuselwa kwezilwanyana zasendle, ukubonelela ngokufikelela kwezinye zezona lwandle zihle kakhulu, ezinokuthula kunye nezicocekileyo kwiCaribbean kunye nehlabathi. .
IiGadi zaseTropical zibandakanya iintlobo ezininzi zezityalo, iintyatyambo, imithi, izihlahlana, kubandakanywa: iintlobo ezininzi ze-orchids zendalo zemithi, iintlobo ezine ze-heliconias, ijinja ebomvu, i-bromeliads, iintaka zeparadesi, i-bouganvillea, i-ferns, i-cycads, iidiliya eziqhakaza, i-Jasmin enevumba Frangiapani, Ixora, iimango, iilimones, iavokhado, ipapaya, ihibiscus, neentlobo ngeentlobo zemithi yesundu.